Nku anya isi awọ - kedu ka m ga-esi zoo ha | Bezzia
Susana godoy | 15/06/2022 12:00 | Mma
Ị chọrọ izobe isi awọ na nku anya gị? Mgbe ahụ, anyị nwere usoro aghụghọ nke ị kwesịrị itinye n'ọrụ. Ọ na-adịkarị na otu ụbọchị, ka anyị na-akpachapụ anya ebe a, anyị na-ahụ ka ntutu isi ndị ọzọ na-acha ọcha si weghara ya. Oge erugo ime ihe iji mee ka brow dum yie otu agba.
Kedu ihe kpatara m ji agba isi awọ na nku anya m? N'ihi nkwụsị nke melanin na-aga n'ihu, anyị na-amalite ịhụ ntutu isi ọcha. Mana ọ bụghị naanị na nku anya mana ntutu ga-enwekwa nke ha. I kwesịghị ichegbu onwe gị n'ihi na enwere usoro usoro na ndụmọdụ ị nwere ike itinye n'ọrụ ozugbo enwere ike. Chọpụta ihe niile anyị na-eweta!
1 Jiri etemeete zoo nku anya isi awọ
2 nku anya tint
3 Ngwọta ụlọ maka nku anya isi awọ
Jiri etemeete zoo nku anya isi awọ
Dị ka ị maara, etemeete bụ otu n'ime nnukwu enyemaka anyị nwere ike ịnweta. N'ihi na ọ bụrụ na ọ bụ banyere dissimulating, ọ ga-emezu ya ozi. N'ezie, anyị ga-ahọrọ mgbe niile ngwaahịa kacha mma, na ndị kpọmkwem. N'okwu a, ị nwere ike nweta pensụl nku anya ma ọ bụ, ya na etemeete nwekwara ebumnuche maka nku anya. Ọ bụrụ na ị nwere brow dị mfe, mgbe ahụ ọ kacha mma ịhọrọ pensụl ma ọ bụ agba nke dị ntakịrị karịa ndo nke brow gị..
Mgbe ọ bụrụ na ị nwere ntutu isi gbara ọchịchịrị, gaa na ndò ma ọ bụ abụọ ọbụna karịa. Mgbe ahọpụtara ya, ị ga-achicha nku anya nke ọma ka agbasa wee gbasaa nke ọma. Ị ga-esetịpụ ahịrị nku anya gị wee dejuo nke ọma. Maka nke ikpeazụ ị nwere ike inyere onwe gị aka na ahịhịa. Nke a ga-adị mma nke ukwuu, ka o wee nwee nkenke. Ị nwekwara ike iji pensụl mee otu ihe ahụ wee jiri ahịhịa na-arọ nrọ. Echiche bụ na mpaghara ahụ kpuchiri ya mana ejiri ya emecha ya.
nku anya tint
Dị nnọọ ka anyị nwere agba agba iji nwee ike igosipụta agba dị iche iche na ntutu isi anyị, n'ihe gbasara nku anya nwekwara ndị kpọmkwem. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike zoo ntutu isi na-acha ọcha na nku anya. Ee n'ezie, ejila agba ntutu agba nku anya, n'ihi na ị nwere ike iwe iwe na mpaghara ahụ. N'ihi ya, ị ga-azụrịrị otu agba agba ma soro ntuziaka ya. Ndị a na-etinyekarị ya na ntụzịaka nke ntutu isi, ma n'akụkụ nke ọzọ. N'ụzọ dị otú a, anyị na-ahụ na ihe niile bụ nke ọma. Anyị ga-echere ihe na-erughị nkeji iri ma nke ahụ bụ ya. Enwere ọtụtụ ụlọ ndị nwere agba nku anya na ụfọdụ n'ime ha enweelarị ngwaahịa ziri ezi n'ụdị pensụl iji mee ka usoro ahụ dịkwuo mfe.
Ngwọta ụlọ maka nku anya isi awọ
N'otu akụkụ ị nwere ike ịme chamomile dị ka ọ dị na mbụ. Mgbe oyi na-atụ, ị ga-agwakọta ngaji anọ ya na a tuo nke turmeric (ihe na-erughị ọkara otu tablespoon). Ugbu a, anyị ga-agwakọta nke ọma ma ọ ga-adị njikere itinye ya n'ọrụ. N'ezie, ọ kacha mma iji ahịhịa mee ya. Ị na-ahapụ naanị ihe dị ka nkeji 5 wee kpochaa mmiri.
Tinyekwa ụfọdụ nwa tii infusion Ọ dị irè. N'ihi na nke a nwere pigmenti nke ga-ezobe isi awọ. Ma ọ bụ eziokwu na ọ bụ naanị nwa oge.
kọfị na koko bụ ihe ọzọ dị ukwuu nke anyị na-agwakọta nwere ike inye nku anya anyị na agba gbara ọchịchịrị, na-asị nke ọma na ntutu isi ọcha. Ọ ga-abụ kọfị ojii na ntụ ntụ koko na ihe niile gwakọtara nke ọma. Ọ bụrụ na ngwakọta na-apụta na mmiri dị ukwuu, mgbe ahụ ị nwere ike itinye ntakịrị mmanụ aṅụ. Na ya, ị ga-ahụ otú ọ na-arapara n'ahụ nnọọ mma na akpụkpọ gị.
Dị ka ị maara, aghụghọ ndị a niile ga-enye agba ntutu isi, ma n'ụzọ ezi uche dị na ha agaghị adịte aka. A pụrụ nanị ikwu na ha ga-adị mma iji pụọ ná nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Nzọụkwụ iji zoo isi awọ na nku anya
Email Marketing, ngwá ọrụ dị mkpa maka azụmahịa gị